Qorshaha xasilinta Muqdisho, Qorshe Quman Balse la qabyaaladeeynayo | Jubbaland Media Online
Qorshaha xasilinta Muqdisho, Qorshe Quman Balse la qabyaaladeeynayo
Posted on June 3, 2017 in Opinions, Wararka // 0 Comments
Qoraalka waxaan doonayaa in aan uga hadlo qorshaha cusub ee ay ku dhawaaqday xukuumadda Soomaaliya ee loogu magac daray qorshaha xasilinta Caasimadda, kaa oo ay dowladdu amar ku bixisay in ciidamada Militariga ay isaga baxaan magaalada islamarkaana ku xaroodaan garoonka Balidoogle, si ciidamada booliska iyo kuwa nabadsugidda ay u xaqiijiyaan nabadgelyada magaalada, islamarkaana hubka looga dhigo maleeyshiyaadka hubeeysan, laguna ururiyo hubka sida sharci darrada ah loogu heeysto magaalada.
Inta aan u gelin qorshahan iyo waxa uu ka badali karo xaaladda Muqdisho, bal marka hore aan iftiinsho xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada Muqdisho.
Muqdisho waa caasimadda dalka, waxaa ku yaal xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda, waa halka ay daganyihiin safiirrada dalalka shisheeye u fadhiya Soomaaliya, waa magaalo hadii ay hagaagto tusaale u noqoneeysa guud ahaan dalka, hadii ay xaaladeedu sidan kusii jirtana ay tusaale xun u noqoneeyso dalka.
Hadaba sidaa oo ay tahay magaalada Muqdisho waxaa ku sugan dhinacyo kala duwan oo hubeeysan oo ka madax bannaan dowladda.
Waxaa kamid ah madax kala duwan oo hore xilal uga soo qabtay degmooyinka gobolka Banaadir, xubno hore u ahaan jiray wasiirro, xildhibaanno, saraakiil ciidan iyo darajooyin kala duwan, dhammaantood waxa ay wataan ciidamo beeleedyo u gaar ah, qaarkoodna waxa ay xirteen wadooyinka hor mara xarumaha ay daganyihiin, ragga ilaalada u ahna ma ahan kuwo u diiwaangashan dowladda, waxa ay ku shaqeeyaan rabitaanka masuulka ay ilaaliyaan, waxayna qaataan awaamiirta uu faro.
Waxaa jira maleeyshiyo beeleedyo hubeeysan oo aan ka tirsanayn dowladda, dabadana kula jira masuuliyiin ay isku heyb yihiin, kuwaa oo siyaabo kala duwan ugu adeega dhinacyada ay ka amar qaataan.
Waxaa intaa dheer in magaalada lagu heeysto hub sharci darro ah, kaa oo ay adagtahay in ciidamada ku howlgan sugidda nabadgelyada ay gacanta ku dhigaan, maadaama goobaha ay howlgallada ka sameeyaan aysan ka fushan karin dadaallada ay ku sugayaan amniga, sababo la xiriira isku dhacyo ay ka cabsi qabaan in ay dhex maraan ayaga iyo maleeyshiyaadka ku hubeeysan degmooyinka gobolka ee aan dowladda ka amar qaadan.
Qorshaha xasilinta Muqdisho iyo waxa uu ka badali karo xaaladda caasimadda.
Qorshahan tan iyo intii ay ku dhawaaqday dowladda waxaa lasoo qabqabtay hub si sharci darro ah loogu heeystay degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaa oo aan dhammaantood ahayn kuwo dowladda u diiwaangashan.
Dowladdu waxay dooneeysaa in ay magaalada ka saarto dhammaan ciidamada Militariga, kuwaa oo la geyn doono saldhigyada ay ciidamada militariga ku leeyihiin deegaanada ka baxsan caasimadda, si amniga magaalada Muqdisho loogula xisaabtamo saraakiisha Booliska iyo kuwa nabadsugidda.
Waxa ay dooneeysaa in dhammaan hubka yaal Muqdisho ee ku jira gacmaha ka baxsan dowladda, sida ilaalada xarumaha ganacsiga iyo ilaalada shaqsiyaadka ka tirsan dowladda uu noqdo mid ay dowladdu ka warqabto kana diiwaansan saldhigyada ciiidamada ay ku leeyihiin degmooyinka gobolka.
In ciidamada sugaya amniga ay awood u yeeshaan in ay ka howlgalaan degmo walba oo ay uga shakiyaan falal amni darro ayagoo aan wax cabsi ah ka qabin maleeyshiyo hubeeysan oo is hortaagta howlgalkooda.
Waa kuma ciidamada ka howlgeli doona Muqdisho;
Magaalada Muqdisho waxa ay dowladdu ugu talo gashay in ay ka howlgalaan ciidamo isugu jira Boolis iyo nabadsugid, la siiyay tababarro gaar ah, una badan ardeydii Jaamacadaha Muqdisho ka baxay iyo qaar kale oo laga soo xulay gobollada dalka, balse dhammaantood ah dad lagu soo xushay hufnaan, aqoon iyo in ay yihiin kuwa u hogaansan awaamiirta ay siiyaan saraakiishooda.
Hadaba aan u daadago dulucda qoraalkeeyga, waxaa jira dhinacyo kala duwan oo kasoo horjeeda qorsheyaasha ay wado dowladda Soomaaliya ee ay dooneeyso in ay ku sugto amniga caasimadda.
Dhinacyadan ayaa isugu jira shaqsiyaad dano siyaasadeed oo gaar ah leh, islamarkaana ay dabada ka riixayaan dowlado shisheeye oo doonaya in Soomaaliya ay kusii jirto qaskii iyo foodadii ay mudada dheer kusoo jirtay.
Waxaa sidoo kale qeyb ka ah ganacsato, ku qaangaartay sharci la’aan iyo nidaam darro, kuwaa oo aysan jirin cid ka qaada canshuuraha sharciga ah ee ku waajibay, islamarkaana aan lagula xisaabtamin waxyaalaha ay dalka soo galiyaan iyo waxa ay ka dhoofiyaan intaba.
Qorsheyaasha guracan waxaa iyaguna qeyb ka ah siyaasiyiin doonaya in ay fashiliyaan dowladda cusub ee Soomaaliya islamarkaana abuuraan kacdoon shacab.
Dhammaan dhinacyadan aan kor kusoo xusay iyo qaar kale oo laga yaabo in ay jiraan ayaa waxa ay ololahooda lagu horistaagayo qorshaha dowladda ee xasilinta caasimadda ay u adeegsanayaan hab qabyaaladeeysan, ayagoo shacabka ka dhaadhicinaya in qorshahan uu yahay mid beel kamid ah beelaha Soomaaliya lagu bartilmaameedsanayo oo la doonayo in hubka looga dhigo, ayagoo ku andacoonaya in Muqdisho ay lamid tahay gobollada kale ee dalka.
Hadaba maxaa la gudboon shacabka Muqdisho.
Bulshada Soomaaliyeed mudo ka badan 20 sano ayay kusoo jirtay dagaallo sokeeye oo ay hormuud ka ahaayeen qabqableyaal dagaal oo garab ka helaya maleeyshiyo beeleedyo, ma jirto wax laga faa’iiday marka laga reebo, qax, barakac, xasuuq, macluul, amni darro, waxbarasho la’aan, caafimaad la’aan iyo arimo kale oo kuwaa kasoo xun.
Muqdisho mudadii yarayd ee ay ka jirtay xasiloonida waxa ay gaartay horumar baaxad leh oo ay ka marqaati kacayaan shacabka ku dhaqan gobolkaasi iyo cid walba oo aragtay.
Shacabka reer Muqdisho iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waa in ay cashar ka qaataan wixii lasoo maray, ayna is hortaagaan shaqsiyaadka fikirrada qaldan wata ee doonaya in ay dib noogu celiyaan wixii aan kasoo gudubnay.
Waxaa Hubaal ah in Soomaaliya waa cusub u baryay, oo maanta ay mareeyso xilligii ay hiigsan lahaayeen dunida kale ee horumartay, waxa aan maanta u baahannahay waa in aan taageerno cid walba oo noo horseedi karta wanaag iyo mustaqbal ifaya.
Waxaan qormadan kusoo gunaanudayaa, Shacabka Soomaaliyeed ha u hiiliyaan xaqa, hana ka dhiidhiyaan shaqsiyaadka danaha gaarka leh ee doonaya in ay dagaal sokeeye dib noogu celiyaan.
FG: qormadan waa aragti u gaar ah qoraha